Amaphampu ane-Slurry, amaphampu avundlile ane-Slurry, i-Froth Pump - i-Boda
Amaphampu e-slurry avundlile
amaphampu we-sump slurry aqondile
Amaphampu we-Submersible Slurry
Iphampu ye-hydraulic submersible slurry
Amaphampu amagwebu avundlile
Amaphampu weFroth amile
Iphampu yeGravel yesihlabathi/Iphampu yokudonsa
Izingxenye ze-Slurry Pump
Izingxenye zephampu yensimbi
Izingxenye ze-Rubber Pump
Izingxenye zepompo ye-polyurethane
Izingxenye ze-SiC Ceramic Slurry Pump
Iphampu yamanzi evundlile
Iphampu engaphansi kwamanzi
Iphampu yamanzi ye-Double Suction
Iphampu yamanzi esiteji esiningi
Iphayiphi Iphampu yamanzi
Iphampu yendle evundlile
Iphampu yendle engaphansi kwamanzi
Iphampu yendle eqondile
Iphampu yamakhemikhali e-Fluoroplastic
Iphampu yamakhemikhali ye-API610
Iphampu ye-Centrifugal yokuzenzela
Udinga umuntu ongakwazi ukukhiqiza okufunayo futhi abe nedizayini yangokwezifiso ephrintiwe ngendlela ocacisa ngayo. Khona-ke insizakalo yethu ye-OEM/ODM ingeyakho!Funda kabanzi
Thenga i-oda eligcwele ngemva kokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.Bese isevisi yethu Yesampula Ye-oda ingeyakho!Funda kabanzi
Ungathanda ukuvakashela eChina futhi unentshisekelo yokusebenza nathi. Khona-ke isevisi yethu ye-Factory Tour ingeyakho!Funda kabanzi
I-Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd.
I-Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd iyinhlangano esebenzela imakethe yephampu yamazwe ngamazwe e-PRC. Isebenza ikakhulukazi imishini yepompo & nepompo eqhutshwayo, izingxenye zokumpompa nokumelana nokugqoka ama-castings, eminye imishini ye-hydraulic, izesekeli njll.
Inkampani yethu inonjiniyela abakhulu kanye nochwepheshe bakudala. Iphinde ibe namathalente angochwepheshe abawazi uhwebo lwangaphandle futhi abanolwazi olukhulu futhi abagcwele ubuphayona nomoya wokudala. Inkampani yethu izosebenza emqondweni “Okuthambekele Kubantu, Ubuqotho bebhizinisi” futhi yanelise imfuneko yamakhasimende ngokushesha nangempumelelo; Ngaphandle kwalokho inohlelo lokuphatha lwesayensi kanye nesiko lebhizinisi elikhandlayo. Okwamanje, ikhasimende lenkampani lithatha izifunda nezindawo ezingaphezu kuka-50. Isivele yakha inethiwekhi yokumaketha eqinile, uhlelo lwesevisi olufaneleka kahle kanye nenhlangano yokuhweba eqinile.
Evundlile Froth Pump Izingxenye
YZQ uchungechunge lwephampu ye-hydraulic submersible slurry
Isihlungi Esivundlile Cindezela Iphampu Yokuphakelayo
iphampu ye-raber slurry engagqoki
D, DM, DF, DY uchungechunge lwephampu ye-centrifugal eningi
I-TZM TZS Series Slurry Pump
I-Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd igxile kakhulu ekukhiqizweni nasekuhlinzekweni kwamaphampu emfucumfucu asezingeni eliphezulu kanye nezingxenye zephampu ezinodaka. Amaphampu ethu aklanyelwe izindawo zokumpompa ezilimazayo nezilimazayo.Angenziwa nge-chrome ephezulu, ama-elastomer ahlukahlukene noma izinto zakamuva ze-ceramic zempilo ende yesevisi nokusebenza okuphakeme.
Isebenza kakhulu ngezinto ezisetshenziswayo zokumpompa nepompo, izingxenye zokumpompa nokumelana nokugqoka izinto ezisakazwayo, eminye imishini esebenza ngamanzi, izesekeli njll. Imikhiqizo iqukethe amaphampu anodaka, amaphampu kaphethiloli we-API 610 namakhemikhali, amaphampu amanzi anamashumi ochungechunge, angaphezu kwekhulu. izinhlobo , izinkulungwane zamamodeli. Zisetshenziswa kakhulu ezimayini, ezensimbi, ezimayini zamalahle, amandla kagesi, i-petroleum, amakhemikhali, imboni yokuhlinzeka ngamanzi kanye ne-drainage nokunye.
Ziyizingxenye ezingashintshaniswa nenye yemikhiqizo eyaziwa kakhulu emhlabeni wonke ebhizinisini lephampu elinodaka. Lokho kusho ukuncishiswa okwengeziwe kwezindleko zamakhasimende ngenxa yokuhlanganiswa kwempahla nokushintshana nezisetshenziswa ezikhona. I-Boda ayigcini nje ngokunikeza amanani ancintisanayo kanye nokulethwa okusheshayo esiziqhenyayo ngezinga lesevisi nokusekelwa kobuchwepheshe esikunikeza amaklayenti ethu.
Akuyona nje indaba yokuthola intengo engcono kakhulu nokulethwa kodwa nesevisi engcono kakhulu. Ngicabanga ukuthi uzothola ukuthi ukwenza uzakwethu weShijiazhuang Boda Industrial Pump Company kuzoba yisinqumo sakho esingcono kakhulu sokuthola inani langempela ekuxazululeni izinkinga zakho zephampu enodaka.
Inkampani yethu izosebenza emqondweni “Okuthambekele Kubantu, Ubuqotho bebhizinisi” futhi yanelise imfuneko yamakhasimende ngokushesha nangempumelelo; Ngaphandle kwalokho inohlelo lokuphatha lwesayensi kanye nesiko lebhizinisi elikhandlayo. Okwamanje, ikhasimende lenkampani lithatha izifunda nezindawo ezingaphezu kuka-50. Isivele yakha inethiwekhi yokumaketha eqinile, uhlelo lwesevisi olufaneleka kahle kanye nenhlangano yokuhweba eqinile.
Enyakatho ye-Shilipu Village, isifunda sase-Chang'an, e-Shijiazhuang, e-China.